Wargeys.com - - Page 2
Ciidamada xoogga dalka oo bur buriyay fariisimo argagixida ay ku lahaayeen gobolka Sh/Hoose
Muqdisho(SONNA)-Ururka 84-aad guutada 14-oktoobar ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa sacadihii la soo dhaafay halkaa ka sameeyay howlgallo…
Guddiga doorashooyinka heer Federaal oo maanta dooranayo guddoomiyaha guddiga.
Muqdisho(SONNA)-Guddiga doorashooyinka heer Federaal ayaa maanta lagu wadaa in ay magaalada Muqdisho ku doortaan guddoon cusub ka dib markii dhawaan ay xilka ka qaadeen gudoomiyihii…
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya iyo dhiggiisa dalka Venezuela oo ka wada hadlay iskaashiga Labada Dal.
Muqdisho(SONNA)-Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa khadka telefoonka wada hadal kula yeeshay dhiggiisa Arrimaha Dibadda ee Dalka Venezuela Mudane…
Jaamacadda Ummadda oo 30-sannadood kadib markuu ugu horeeysay ay ka baxeeyn saxafiyiin
Muqdisho(SONNA)-30-sanadood kadib dufcadii ugu horeysay – arday baratay cilmiga saxaafadda ayaa maanta ka qalin-jebisay Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. Waa ku dhawaad 45 arday oo dhammaystay heerka…
SONNA (MUQDISHO)- Madasha Munaasabadda tartanka Doorashada xilka Guddoomiyaha Doorashooyinka Heer Federaal ee FEIT ayaa lagu qabtay gudaha hoolka shirarka ee Avisyoni, waxaana xilka isu soo…
Wasaaradda Gaashaandhiga oo Cambaareysay duqeymo Kenya ay ka geysatay Jubooyinka iyo Gedo
SONNA (MUQDISHO)- War Qoraal ah oo ka soo baxay Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa lagu cambaareeyay duqeymo ay ciidamada Kenya ka geysteen gobolada Jubooyinka iyo Gedo. Warqadda…
Muqdisho(SONNA)-Ciidamada Daraawiishta Galmudug ayaaa maanta Howlgal Amniga lagu xaqiijinaayo ka sameeyay Deegaanno badan oo ka tirsan Koonfurta Gobolka mudug. Saraakiisha ciidmada Daraawiishta Galmudug ayaa shegeeyn…
Ciidanka guutada 3-aad qeybta 27-aad ee xoogga dalka ayaa howlgallo ka dhan ah argagixisada Al-Shabaab waxay ka fuliyeen inta u dhaxeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad…
Golaha Wasiiradda Jubbaland oo ansixiyey heshiis Wasaaradda Dekadaha iyo Gadiidka Badda lagashay shirkada gaar loo leeyahay.
Kismaayo- SONNA)-Madaxweynaha Dowladda goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiiradda Jubaland oo maanta lagaga hadlay qodobo kale duwan. Kulanka waxaa…
Guddiga qaban qaabada oo shaaciyay xiliga ay qabanayaan doorashada guddoomiyaha gudddiga FEIT
Guddigii loo xil-saaray qaban qaabada doorashada guddoomiyaha guddiga FEIT ayaa shaaciyay xilliga ay dhacayso doorashada guddoomiyaha guddiga hergalinta doorashooyinka heer Fadaraal. Sii akhri
© 2021 WARGEYS.COM